Online ​ပေါ်တွင်​ Box Apk ကိုအသုံးပြုပြီး အကောင့်ဖွင့်ခြင်း,Upload တင်ခြင်း,Link , ချပေးနည်း နှင့် Upload APK များစုစည်းမူ - Software Guide
Home / Online နည်းပညာများ / Upload နည်းလမ်း / နည်းလမ်းများ / Online ​ပေါ်တွင်​ Box Apk ကိုအသုံးပြုပြီး အကောင့်ဖွင့်ခြင်း,Upload တင်ခြင်း,Link , ချပေးနည်း နှင့် Upload APK များစုစည်းမူ
Online ​ပေါ်တွင်​ Box Apk ကိုအသုံးပြုပြီး အကောင့်ဖွင့်ခြင်း,Upload တင်ခြင်း,Link , ချပေးနည်း နှင့် Upload APK များစုစည်းမူ Reviewed by Ko Lin on 9:50:00 AM Rating: 5
Online ​ပေါ်တွင်​ Box Apk ကိုအသုံးပြုပြီး အကောင့်ဖွင့်ခြင်း,Upload တင်ခြင်း,Link , ချပေးနည်း နှင့် Upload APK များစုစည်းမူ
Ko Lin 9:50:00 AM Online နည်းပညာများ , Upload နည်းလမ်း , နည်းလမ်းများ
Andriod ဖုန်းကိုင်ဆောင်ထားသော သူငယ်ချင်းတွေ တစ်ချို့တစ်ဝက် သိရှိသားဖြစ်သလို့ မသိသေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ Apk တွေကိုအသုံးပြုပြီး Online ​အကောင့်ဖွင့်ခြင်း,Upload တင်ခြင်း,Link , ချပေးနည်း ဒီပို့လေးကို ရေးပေးမယ်လို့ စိတ်ကူထားတာ ကြာပါပြီ ခုတော့ တင်ပေးလိုက်ပါပြီဗျာ။
နမူနာအဖြစ်နဲ့ Box Apk ကိုအသုံးပြုပြီး ရေးပေးသွားမှာပါ ကျန်ရှိနေတဲ့ Upload Apk တွေကလည်း ဤနည်းအတိုင်းပါ ဒီနမူနာ တစ်ခုကို နားလည်သွားပြီးဆိုရင်တော့ အားလုံးကို နားလည်သွားလိမ်မယ်၊ အောက်မှာ အကောင်းဆုံး ရှင်းပြထားပါတယ်။
Online ​ပေါ်တွင်​ Upload တင်မယ့် APK တွေကို အောက်မှာ အရင်ဒေါင်းပြီး မိမိဖုန်းတွင် Install အရင် ပြုလုပ်ထားပေးပါ။
Upload တင်မယ့် APK များကတော့=>>>>>>>
ဒီပို့စ်လေး ကတော့ Box Apk ကိုအသုံးပြုပြီး အကောင့်ဖွင့်ခြင်း,Upload တင်ခြင်း,Link , ချပေးနည်း တွေကို အောက်မှာ ပုံလေးတွေကို တစ်ခုချင်း ရှင်းပြထားပါတယ် ။
Box Apk လေးမှာ Verify အကောင့်ဖွင့်ခြင်း
Sign Up မပြုလုပ်ခင် မိမိဖုန်းမှာ အခု ပြုလုပ်မယ့် အီးမေ့ကို အရင် ထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်။ အီမေ့ထဲ့ကို Box က စာရောက်ပြီး Verify လုပ်ရမှာ မို့လိုပါ။
Box အကောင့်သစ်အတွက်ကတော့ Box Apk ကို အရင် ဝင်ပြီး အကောင့်ပြုလုပ်ရပါမယ်။
Box Apk ကို ဝင်ရင် ဒီလို့ တွေ့ရပါမယ့် အဲ့ဒီမှာ Sign Up ဆိုတာ နှိပ်လိုက်ပါ
အကောင့်သစ် ဖွင့်မှာ မို့လို့ပါ.
Sign Up ကို နှိပ်ပြီးရင်တော့ အောက်ပုံစံအတိုင်း တွေ့ရမယ်
အဲ့ဒီမှာ မိမိဖုန်းမှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ အီးမေ့တစ်ခုနဲ့ ပါ့စဝပ့် ကို ထည့်ပြီး
Sign Up ဆိုတာ ဆက်နှိပ်လိုက်ပါ.
Thank you! Just one more step ... ဘောက်လေးမှာတော့ Log in ဆိုတာကို ဆက်နှိပ်ပါ
ဒီအဆင့်မှာတော့ဖုန်းရဲ့ Home key နဲ့ ပြန်ထွက်ပြီ မိမိဖုန်းမှာ
ထည့်သွားထားတဲ့ အီးမေ့ဆီကို သွားပါ ။
အီးမေ့ထည့်မှာ Box က ပို့လာတဲ့ စာအိပ်တွေ့ရပါမယ့်၊၊
အဲ့ဒီ Box က ပို့လာတဲ့ စာအိပ်လေးကိုဖွင့်ပြီး အဲ့ဒီမှာ Verify Email. ဆိုတာကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဒီမှာတော့ ကိုယ့် Jout မြဲ့ Browser တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီး အောက်က
Jout once ဆိုတာကို ဆက်နှိပ်ပါ။
Box Upload ဆိုက်ကိုအောင်သွားရင်တော့ အောက်ကပုံအတိုင်း မိမိအကောင့်ဖွင့်နေတဲ့
အီးမေ့နဲ့ ပါ့စဝပ်ကို ပြန်ထည့်ပါ ပြီးရင် Log in ကို ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဒီလောက်ဆို Box Verify အကောင့် ဖွင့်နည်း ပြီးဆုံးပါပြီး
ဖုန်းကို Hom key နဲ့ ပြန်ထွက်ပြီ Box Apk ထဲ့ကို ပြန်သွားပါ။
Box Apk လေးက Online ​ပေါ်တွင်​ Upload တင်ခြင်း
Box Apk ဝင်ပြီး အဲ့ဒီမှာ ခုနားကဖွင့်လာတဲ့ အီးမေ့နဲ့ ပါ့စဝပ်ကို အောက်ပုံစံအတိုင်း
ဖြည့်ပြီး Sign Up နဲ့ ပြန်ဝင်ပါ
Upload လင့်တင်ဖို့ Box Apk ထဲ့က အောက်နားက +အပေါင်း ဘောက်လေးကို နှိပ်ပေးပါ။
Box Apk ထဲ့မှာ Folder ဆောက်တည်ပြီး ထည့်မယ်ဆိုရင် New Folder ကို နှိပ်ပြီး မိမိထားချင်းတဲ့နာမည်လေးနဲ့ Folder ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ (ဥပမာ APK Folder ) ဆိုတာ မျိုးပေါ့။
Upload တင်ဖို့ကတော့ Upload Files ကိုနှိပ်ပြီး မိမိဖုန်း ဖိုင်သို့ ရောက်သွားပါမယ်။
ဒီမှာတော့ ဖုန်းဖိုင်ထဲ့က မိမိ Upload တင်ချင်တဲ့ Apk တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီး အမှတ် ခြစ်ပေးပါ။
ပြီးရင်တော့ အောက်က Upload ဆိုတာကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဒီမှာလည်း နောက်ထပ် Upload ကိုပါ ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
အောက်ပုံကတော့ Apk Upload ပြုလုပ်နေတယ် 100% ပြည့်အောင် အချိန်ခဏစောင့်နေပါ
100% ပြည့်ရင် Box Apk ရဲ့ Folder ထည့်မှာ Upload တင်နေတဲ့ Apk လေးရောက်နေတာကို တွေ့ရပါမယ် ဒီအဆင့်မှာတော့ Upload တင်ခြင်း ပြီးဆုံးပါပြီ။
ကိုယ့်ပို့ပေးမယ့်သူဆီကို Link ချပေးနည်း
Upload တင်ပြီးတဲ့ Apk လေးကို ကိုယ့်ပို့ပေးမယ့်သူဆီကို Link ချပေးရအောင်ဗျာ။
Upload တင်ပြီးတဲ့ Apk လေးကို လေးကို အမှတ် ခြစ်လိုက်ပါ .။
ပြီးရင်တော့ Box Apk လေးရဲ့ အောက်ဆုံးက အဆက်သုံးဆက်ပုံစံလေးကို နှိပ်ပါ။
အဆက်သုံးဆက်ပုံစံလေးကို နှိပ်ပြီးသွားရင် Share ဆိုတာ ပေါ်လာလိမ်မယ့် Share ကိုတာ ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဒီမှာတော့ Note ,Viber, Facebook Messenger,Copy link စသည်တိုကို
ကူးယူပြီး ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ကျနော်ကတော့ Copy link လင့်နှင့်ပဲ ကူးယူလိုက်ပါတယ်။
Copy link ကူးယူပြီး Backkey နဲ့ ထွက်နိုင်ပါပြီ
ကူးယူလာတဲ့ လင့်ကို သိမ်းထားချင်တော့ Note ထဲ့ကို သွားပါ Note ကို ကြာကြာဖိထားပါ ပြီးရင်
Paste ကို တွေ့ရင် ဆက်နှိပ်လိုက်ပါ။
Paste ကို နှိပ်ပြီးရင်တော့ ကူးယူလာတဲ့ လင့်ကို Note မှာ တွေ့ရှိနေရပါမယ့် အဆင်ပြေပါပြီး
ဒီလင့်ကို သိမ်းပြီး နောက်သူငယ်ချင်းတွေ လင့်ချပေးချင်ရင်လည်း လင့်ကို Copy ယူပြီး Paste ဖြင့်
ကိုယ့်ပို့ပေးမယ့်သူဆီကို Link အမြဲ့တမ်း ပို့ပေးနိုင်ပါပြီး။
ဒီလောက်ဆို အားလုံး အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်ဗျာ။